Haweenka Soomaalida oo la sheegay in uu ku yartahay Vitamin D | Somaliska
Haweenka Soomaalida oo la sheegay in uu ku yartahay Vitamin D
Cilmi baaris ay dhawaan samaysay xarunta Baaritaanka caafimaadka ee lagu magacaabo (CKF, Centrum för klinisk forskning) ayaa lagu soo bandhigay in haweenka Soomaalida ee uurka leh ay haysato nafaqo la’aan xaga Vitamin D ah taasoo keentay in jirkooda uu aad daciif uu noqday.
Haweenka Soomaalida ee ka qeyb qaatay baaritaanka ayaa lagu soo bandhigay in 10-kii 9 qof ay haysato Vitamin D la’aan. Qofka uu ku yaraado Vitamin D ayaa waxaa la soo darsi kara in uu daciif ka noqdo lafaha. Cilmi baarayaasha ayaa ku taliyay in haweenka Soomaalida la siiyo dawo ay ka heli karaan Vitamin D maadaama aan inta badan laga helin cuntada. Waxaa sidoo kale Vitamin D laga helaa iftiinka qoraxda. Sababta aysan haweenka Soomaalida qoraxda uga helin Vitamin D ayaa xitaa lagu tilmaamay maadaama ay xirtaan dhar culus xiliga xagaaga.
Haweenka uurka leh ee uu ku yaryahay Vitamin D ayaa xitaa la sheegay in ay qatar ugu jiraan in ay dhalaan caruur daciif ah ama qaba cudurka autism.
Wararka Somaliska iyo idaacada Sweden kala soco app-keena
February 12, 2015 at 10:15
Hayeh goono iyo dabagaab dumarka ha xirtaan meyna leeyihiin sideey u helaan Vitamin?
Bashiir AbuXudayfah says:
February 12, 2015 at 11:02
Dumarka Soomaaliyeed waxa ka maqan waa qoraxdii dabiiciga ahayd. Waxaana arinkaa Vitamin D la’aanta in dumarkeeni Qurbaha ku dhalaan ilmo xanuunsan ama fooshii lagu qalo.
Islaan 6 ilaa 10 wadankii kusoo dhashay ayaa kii 11 aad Sweden ku dhashay lagu qalay.
TALO AHAANA Waxaan Dhihi Lahaa qurbe Caafimaad iyo Diinba lagu waaye dalkii Haloo noqdo. Welibana gaadh ahaan dumarka dalkii hala geeyo Hana lagu biilo.
arinta labada sano maxa war laga haayaa walaaalayaal
February 12, 2015 at 14:40
Waal asma waxaankamid ahay dadkaas kiiskayga 3 bilod buu maxkamad yaalaa warna ka
A haayo ee walal adigu xagaaga war igasii Hadad awodid
February 12, 2015 at 17:27
2 Sano walal waa inad sugtaa kiiska haduba maxkamada yaalo mudo 6 bil ah maxaa yelay aniga ayay iso martay oo sugayay mudadaas markaa wediyay waxay igu dhaheen waqtigas la sugaa oo dadka ayaa badan marja ilaah ha fududeeyo aniga waxay iso direen diidmo kale maxkamada oo ay i leyihiin Aqoonsiga iyo Mudo somalia kuma wada noleen lakin ilmo ayaa iigu dhashay sweden DNA waa is wada lahaanay marka ilaah hanoo wada saqiro
asc akhyarta ,aniga jawab waxan kasugoya migrationsveket 19bilood markan waceyna wexey ileyihin sug wankusojawaabi dhona ,cunug iyo xaas ayaa ijooga sverige ,2013 bishi agosto ayaan dacwo migrationsverket kaxareystey ila markas jawab leen sugoya marka maxad isledihin walaal ?mahadsanidin
Sheekh Osmaan says:
Dhalinta sharafta leh oo iiga war roon dalka maxad iga siin kartaan war qofkii de’ yar ahaa oo asaga oo aan waxba u dhamaan qaan gaara 18 gaara xitaa aan wareesi marin
Ma saxa uu la xukun yahay de’yarta?
Mise haduu qaan gaaro waxba meesha uma yaalaan?
Waa qof faro lahaa maadaama ay awal dheheen qofkii fari leh oo de’yar AH waa cafis!?